अ'नियमित म'हिनावारीको स'मस्याबाट मु'क्ति पाउ'न अपनाउनुहोस् यी उपा'य - HPsanchar.com
October 12, 2020 biplov adhikari घरेलु तरिका 0
म’हिनावारीमा अनियमितता हुने भए’का कारण कुनै पनि म’हिलाका विशेषगरी कि’शोरीहरुका लागि महिनाका ती दिनहरु निकै तनावपूर्ण र पीडादायक हुने गर्दछ । आधुनिक जीवनशै’ली, वातावरणीय प्रदुषण र शहरी खानपानमा आएको परिवर्तनका कारण धेरैजसो कि’शोरीहरुलाई महिनावा’री भएका बेला अत्यधिक पी’डाको महशुस हुनु र दैनिकी तनावपूर्ण हुनु अहिले सामान्य भइसकेको छ। निकै चिसो खाना खानाले म’हिनावारी नियमित हुने गर्दैन भने कहिले निकै गर्मी कुराहरु खानाले म’हिनावारी हुने गर्दछ । जसबाट महिनामा दुईपटक वा दुई महिनामा एकपटक हुने गर्दछ । यसरी अनियमित रुपमा महिनावारी हुँदा पेट, कम्मर र ढा’डमा हुने पीडा हुने गर्दछ र यस्तो पि’डालाई सहन निकै गाह्रो र कष्टपूर्ण हुने गर्दछ । यस्तो कष्टपूर्ण पीडाबाट राहत दिने केहि घरेलु उपचारहरु पनि छन् चिन्ता नलिनुस् । जुन खानेकुरालाई तपाईंले खानुपर्ने हुन्छ ।
१) गाजर: गा’जरले आँ’खाको लागि राम्रो गर्ने मात्र नभई म’हिनावारीको पीडालाई पनि कम गर्ने गर्दछ । स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार, एक ग्लास गाजरको रस पिउनाले माहिनावारी भएको बेला र’क्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पीडाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ ।
२) मेवा: म’हिनावारी भएको बेला मेवा खानाले फाइदा पुराउँछ । धेरैपटक महिनावारीको दौरान र’क्त प्रवाह सहि तरिकाले हुने गर्दैन जसका कारण अझ पिडा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा मेवाको सेवन गर्नाले र’क्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ ।
३) दुध: दुध क्याल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो, म’हिनावारीको पीडालाई कम गर्न एक ग्लास दुध पिउने गर्नुहोस् यसले तपाईंको क्याल्सियमको कमीलाई पूरा गरिदिनेछ र पीडाबाट आराम मिल्नेछ । यदि तपाईंलाई दुध मिठो लाग्दैन भने तपाईंले क्याल्सियमको चक्की पनि खानसक्नुहुन्छ ।
४) घिउकुमारी: महिनावारीको दौरान एक चम्चा महमा यसलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गर्ने गर्दछ ।
५) तुलसी: पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस् । तुलसीमा भएको क्याफीड एसिडले महिनावारीको पीडालाई कम गर्ने गर्दछ । धेरै पीडा भइरहेको छ भने ७–८ वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउनुहोस् ।
६) अदुवा: एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस् । यदि यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको तीन–चार पटक खाने गर्नुभयो भने पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ ।
७) व्यायाम: हुन त हामीले दिन दिनै व्यायाम गर्नु जरुरी छ तर महिनावारीको पीडा भएको बेलामा व्यायाम अत्यावश्यक कुरा हो । उक्त प्रवाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै आवश्यकता पर्ने गर्दछ । ८) जंक फुडहरुबाट टाढै रहनुहोस् मासिक धर्मको बेला आफ्नो खाने व्यवहारमा पनि ध्यान राख्नुहोस् । जति सक्नुहुन्छ जंक फुड नखानुहोस् र रक्सीबाट टाढै रहनुहोस् । ९) तातो पानीले नुहाउनुहोस् तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ ।
गा’डीमा या’त्रा गर्दा वा’कवाकी लाग्छ ? यी उपा’य अ’पनाउनुहोस् त ! के तपाई पनि मो’टर गाडी र हवा’ई जहाजमा यात्रा गर्दा रिँगटा लाग्ने, वा’कवाकी आउने, असहज अनुभव गर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? सामान्य बोलीचालीको भाषामा यस्तो स’मस्यालाई गाडी लाग्नु भनिन्छ । यसलाई चि’कित्सकीय भाषामा भने मोसन सि’कनेस भनिन्छ । यो सामान्य समस्या भए पनि धेरैलाई सताइरहने समस्या हो । चिकित्सकहरूका अनुसार यो गम्भीर समस्या त होइन, तर यसले बेचैनी, प’सिना आउने, रिँगटा लाग्ने र वान्तासम्म हुने भएकाले व्यक्तिलाई कमजोर एवं आलस्य बनाउँछ । त्यसैले यात्राका बेला गाडी लाग्ने अर्थात मोसन सिकनेसको समस्या छ भने चि’कित्सकको सल्लाह लिएर औ’षधि सेवन गरेर यात्रा गर्न चिकित्सकको सुझाब छ । गाडी लाग्नु भनेको व्यक्ति विशेषको शरीरको सन्तुलनलाई अनुभव गर्ने अवस्थासँग जोडिएको समस्या हो । यात्रा गर्दा शरीरको इन्द्रियहरु आँखा कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आआफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य बान्ता उत्पन्न हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
मोसन सि’कनेसबाट बच्ने तरिकाः पहिलो कुरा त मा’नसिक रूपमा नै तयार हुनुपर्छ बान्ता हुन्छ की रिंगाटा लाग्छ की भन्ने जस्ता कुराहरू मनमा लिएर बस्नु हुँदैन । यस्तै गाडीमा बसेको बेला सीधा हेर्ने गरे यो समस्या कम हुन्छ । आँखाको दृष्टि झ्याल छेउछाउका वस्तुमा भन्दा टाढा के’न्द्रित गर्नुपर्छ । गाडीको पछिल्लो सिटमा बस्दा गतिको अनुभूति बढी हुन्छ, त्यही भएर गाडी लाग्ने अर्थात मोसन सिकनेस भएकाहरूले सम्भव भएसम्म गाडीको अगाडि बस्नुपर्छ । गाडि लाग्ने व्यक्तिहरूले यात्रा गर्नुअघि प्रोक्लोरपेराजिन वा जेनरिक नाम भएको औ’षधि सेवन गर्दा राहत मिल्छ । त्यस्तै हावा आउने गरी झ्यालपट्टीको सिटमा बस्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कतिपयलाई ब्रेक तेल अथवा डिजेलको गन्ध मन नपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसैले गाडि रो’केको अवस्थामा बाहिर निस्केर फ्रेस हावा लिनु पनि उपयुक्त हुन्छ । हाजमोला कागति यस्तै हलुका अमिलो पिरो मिश्रित पाउ खाँदा पनि बान्ता हुँदैन । खालीपेट यात्रा गर्नु पनि हुँदैन । चकटलेट खाँदा पनि राम्रो हुन्छ ।
कसलाई हुन्छ मोसन सिकनेस ? हुन त यो समस्याले सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई स’ताइरहेको हुन्छ । त्यसमा पनि खास गरी दुई वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्मका बालबालिका यस्तो समस्याप्रति अति संवेदनशील हुन्छन् । महिलालाई पनि बढी मोसन सिकनेस हुने गर्दछ । ग’र्भवती, र’जस्वला भइरहेका वा हार्मोन लिइरहेका महिलाहरूलाई पनि गाडी लाग्ने अर्थात मोसन सिकनेस हुन्छ । मा’इग्रेन भएकाहरूलाई समेत बढी मोसन सिकनेस हुने गर्दछ ।
घ’रभरि मु’सा, उडु’स, झिंगा र माउसुली भए’र त’नावमा हुनुहुन्छ ? भगाउन यी ४ त’रिका अपनाउनुस् !